UGoogle uhlawulise irekhodi engama-2,42 ezigidi ze-EU nge-EU
Blog » UGoogle uhlawulise irekhodi engama-2,42 ezigidi ze-EU nge-EU. Esi sisiqalo nje, kunokubekwa ezinye izohlwayo ezibini.
UGoogle uhlawulise irekhodi engama-2,42 ezigidi ze-EU nge-EU. Esi sisiqalo nje, kunokubekwa ezinye izohlwayo ezibini.
Ngokwesigqibo seKhomishini yaseYurophu, uGoogle kufuneka ahlawule isohlwayo se-EUR 2,42 yezigidigidi ngenxa yokwaphula umthetho.
Ikhomishini yaseYurophu ithi iGoogle isebenzise izinto zayo zokuthenga kuGoogle kwiziphumo zenjini yokukhangela zikaGoogle ukonakalisa abanye ababoneleli beempahla. Amakhonkco kwimveliso yokuthenga kaGoogle kwaye ayiphezulu kwiphepha leziphumo zokukhangela, ngelixa isikhundla seenkonzo zokhuphiswano njengoko kumiselwe yi-algorithms yokukhangela kaGoogle ivela kuphela kwizikhundla ezisezantsi.
Ngeentsuku ezingama-90 uGoogle kuya kufuneka atshintshe inkqubo yokujonga i-algorithm. Ngaphandle koko, isohlwayo siya kubekwa kwi-5% ye-avareji yokuthengiswa kwe-alfabhethi ye-alfabhethi, inkampani yabazali kaGoogle.
Umkomishinara wase-Europe kuKhuphiswano uMargrethe Vestager wathi le nto yenziwe nguGoogle ayikho semthethweni phantsi kwemithetho yokuchasana ne-EU. Ngesi sigqibo, intshayelelo yayimiselwe kuphando lwamva.
Ikhomishini yaseYurophu iphanda amanye amatyala amabini awathi kuwo u-Google waxhaphaza imithetho yokhuphiswano kwimarike yasimahla: inkqubo yokusebenza ye-Android ne-AdSense.
Funda ngakumbi: https:
Post edlulileyo IKhomishini yaseYurophu ifuna abameli babazise ngokwakhiwa…
Post Next I-Rotterdam harbor kunye ne-TNT yexhoba lokuhlaselwa kweHacker yehlabathi